विवाह गरेको लामो समयसम्म बच्चा नहुनुको कारण यस्ता छन् ! – MediaNP
विवाह गरेपछि सबैजसो दम्पतीको चाहना बच्चा जन्माउने हुन्छ । बच्चाको विषयमा आमाबुबाले पनि त्यत्तिकै चासो देखाउने गरेका छन् । विवाह गरेको चारपाच वर्ष सम्म बच्चा भएन भने नेपाली समाजमा कुरा काट्ने चलन छ । समाज र घरपरिवारको लागी भएपनि छिट्टै बच्चा जन्माउन महिलाहरु बाध्य भएका छन् । तर केहि दम्पती भने बच्चाको चाहना हुदाँहुदै पनि बच्चा नहुदाँ निकै निराश भएका छन् । जसको कारणले गर्दा उनीहरुको मानसिक अवस्था पनि बिग्रने गरेको छ । यसलाई नेपाली समाजका मानिसहरुले पूर्वजन्मको पाप वा कुनै देवी देवताको श्राप पनि भन्ने गर्दछन् । यो एकदमै गलत कुरा हो । विशेषगरी यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको अवस्थकर खानपान तनाव लिनु, कुनै रोगले संक्रमण हुनु लगायतका हुन् । तपाईको पनि विवाह गरेको लामो समय सम्म सन्तान भएको छैन् भने कारणको विषयमा जानेर त्यसै अनुसार अघि बढ्नु जरुरी छ ।
यस्ता छन् बच्चा नहुनुको कारणहरुः
१.महिलाको गर्भाशयमा गाठ हुनु ।
जब युटरसको मासंपेसी असमान्य रुपमा अतिरिक्त विकास हुन लाग्दा त्यहा कुनै ट्युमर वा कुनै समस्या भएमा बच्चा रहदैन् । यदि यस्तो भएको छ भने महिनावारी हुदाँ अत्याधिक रक्तश्राव हुने वा यौन सम्बन्धको बेला अत्याधिक दुख्ने गर्दछ ।
धेरै महिला वा पुरुषहरु हाइपरटेन्सन र हाई ब्लडपे्रसरको समस्याबाट ग्रसित छन् । यसको साथमा कुनै रोगको संक्रमण भएमा पनि बच्चा नहुने समस्या हुन्छ , त्यसैले आफ्नो स्वस्थ्यको जाँच गराउन जरुरी छ ।
३. गलत आदत
धुम्रपान, अल्कोहल वा ड्रिग्स गर्ने व्यक्तिको पनि बच्चा नहुने समस्या हुन्छ ।
४.वातावरण वा गलत खानपान
आधुनिक र व्यस्थ जीनशैलीको कारणले अंधिकाश अनियमित रुपमा खानपान गर्न बाध्य भएका छन् । जसको कारण इंफिलिटीको समस्या हुनुको साथमा पोष्टिक आहारको कमी हुन्छ र बच्चा हुदैन् । हावापानीको कारणले अधिकाश मानिसहरु कुनै रोगको संकमणमा पर्ने कारण बच्चा हुने सम्भावना न्युन हुन्छ ।
थाइराइड गन्थीले काम नगार्नले गर्भधारण गर्नमा समस्या उत्पन हुन्छ । यदि थाइराइट ओभर एक्टिभ भएमा
गर्भाधारणमा बाधा आउाछ त्यसैले समय समयमा टेस्ट गराउनु जरुरी छ । यसबाहेक बच्चा नहुनुको कारणहरुमा अत्याधिक तनाव लिनु, लामो समय सम्म मोबाइल, फोन वा कम्प्युटरमा बस्नु पनि पर्दछन् ।